Fahalalahana miteny eny amin’ny toeram-pianarana ambony: Voakiana ny Politikan’ny Anjerimanontolon’i Massachusetts · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2011 9:37 GMT
Zavatra iray saropady ny resaka fahalalaham-pitenenana eny amin'ny toeram-pianarana any Etazonia, ary lahatsoratra iray ao amin'ny Huffington Post no namerina indray mandeha indray ny adihevitra mikasika izany. Tamin'ny 2009, niresaka isika momba ny Anjerimanontolo Butler sy ny fomba nikirakirany ny tsikera avy amina mpianatra iray mpitoraka bilaogy, Jess Zimmerman.
Ankehitriny dia mikasika kosa indray ny politika napetraky ny Anjerimanontolon'i Massachusetts. Raha ny ambaran'ny FIRE (Foundation for Individual Rights in Education), tena mampiasa saina ny politikan'ilay Anjerimanontolo mikasika ny fivorivoriana.
“Ilay politika dia manana fepetra manokana ampiharina amin'izay tondroiny ho “fivorivoriana mahabe resaka.” Raha toa ny fivorivoriana iray ka heverina ho “mahabe resaka,” dia tsy azo atao afa tsy eo anelanelan'ny amin'ny mitatao vovonana sy amin'ny 1 ora folakandro eo amin'ny tohotohotry ny Fikambanan'ny Mpianatra, tsy maintsy efa nanaovana filazana dimy andro mialoha raha kely indrindra, ary itakiana amin'ny vondron'ny mpianatra mba hiantoka ny fandriampahalemana amin'ny alalan'ny mpikambana avy ao amin'ny fikambanan'ny mpianatra, izay tena manosika betsaka an'ireo mpianatra hisedra toe-javatra tena sarotra ka mety ho mora amin'ireo polisy efa voaofana ho amin'izany raisina an-tànana. Tsy mbola nisy lalànan'ny fitenena kidaladala toy ity iray ity.”
Popehat, bilaogy iray miresaka momba ny lalàna, dia milaza fa ilay fepetra dia zavatra notefitefena maimaika fotsiny mba hanarahana – na dia anarany fotsiny ihany aza – ireo fitsipiky ny Fanavaozan-dalàna voalohany.
“Aleo hazava ny resaka — ity dia ezaka tsy misy famakian-doha mba hanarahana ireo fitsipiky ny Fanavaozan-dalàna voalohany izay efa voasoritsoritra tsara ho an'ny dimam-polo taona eo ho eo.”
Mbola tsy naneho hevitra ampahibemaso momba izany resaka izany ny Anjerimanontolo, nefa satria nosokajiana ho iray amin'ireo ratsy indrindra amin'ny fianarana tsy mba misy fahalalahana miteny io sekoly io dia mety ho voatery hamaly ihany izy.